အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ - Myanmar Network
Posted by Tin Nyunt on August 27, 2011 at 13:29 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အမြန်ဆုံးနဲ့ အခြေခံအကျဆုံးကို ပြောပါ့မယ်။ တတ်ပြီးသားတွေကို မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ခုမှစပြီး လေ့လာမယ့် သူတွေကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။
စတင်လေ့လာလိုသူတွေအတွက် အညွှန်းကိုစပြောမယ်။ (လိုရင်း တိုရှင်းပေါ့)
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကလေးလိုသဘောထားပါ
ကလေးဆိုတာ စကားသင်ရင် ဖြည်းဖြည်းသင်ပေးရတယ်။ ပထမဦးဆုံး သူတို့ နားထောင်တာကို အရင်လုပ်တယ်။ နားရည်ဝရင် ပြောတာကို စလုပ်မယ်။ နောက်မှ အဖတ်နဲ့ အရေးကို လုပ်ကြတယ်။
၂။ အင်္ဂလိပ်စကား နေ့စဉ်နားထောင်ပါ
ရေဒီယိုကို အင်္ဂလိပ်ပိုင်း အစီအစဉ်များများနားထောင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော TV တွေကြည့်ပါ။ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရင် လည်း အင်္ဂလိပ်ကားတွေ များများကြည့်ပါ။ ဗီဒီယိုမှာ အင်္ဂလိပ်ကားတွေကြည့်ရင် မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ မကြည့်ဘဲ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးကိုပြောင်းကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အွန်လိုင်းကို တက်ရင်လည်း အင်္ဂလိပ် သင်ခန်းစာ site တွေကို လျှောက်လေ့လာကြည့်ပါ။
၃။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်သူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားပါ
အင်္ဂလိပ်စကားဆိုတာ ပြောမှတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်လို ပြောနိုင်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး များများ ပြောနိုင်အောင် အခွင့်အလမ်းယူပါ။ စပြီး သင်ရင် လွယ်ကူတဲ့ ဖတ်စာအုပ်လေးတွေကိုပဲ ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။
၄။ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်လမ်း၊ ပုံပြင်တွေများများဖတ်ပါ
ကလေးပုံပြင်စာအုပ်တွေကို အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ပါ။ ပြီးမှ ESL (English asaSecond Language) အနေနဲ့ ပြဌာန်းထားတာတွေကို လေ့လာပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုကြော်ငြာတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေ၊ အညွှန်းတွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ခုမှစပြီးလေ့လာတာဆိုရင် EnglishClub.com ကို ၀င်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။
၅။ ကိုယ်မသိတဲ့ စာလုံးအသစ်တွေတွေ့တိုင်း ချရေးထားပါ
New Words ဆိုပြီး မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်လောက်ထားပါ။ အက္ခရာ စဉ်အလိုက် စာမျက်နှာထိပ်တွေမှာ A, B, C … စသဖြင့် ရေးထားပါ။ A နဲ့စတဲ့ စာလုံးတွေကို A စာမျက်နှာမှာပဲ မှတ်ထားပါ။ နမူနာ စာကြောင်းလှလှ လေးတွေကိုလည်း ကြိုက်ရင်မှတ်ထားပါ။ အဘိဓာန်သုံးရင် English-English အဘိဓာန်ကိုပဲ သုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ။
၆။ ဒိုင်ယာရီရေးရင် အင်္ဂလိပ်လိုရေးပါ
စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် စကြည့်ပါ။ ကိုယ်ခံစားရတာကို စရေးကြည့်ပါ။ ရာသီဥတုအကြောင်း ရေးကြည့်ပါ။ ဒီနေ့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ရေးကြည့်ပါ။ မနက်ဖြန်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့မယ်၊ ဘာတွေ လုပ်မယ်ဆိုတာရေးကြည့်ပါ။
၇။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံတွေကိ်ု သွားလည်ကြည့်ပါ
အင်္ဂလိပ်စာမြန်မြန်တတ်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့လူတွေကြား ရောက်နေတာက ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ အတူနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။ ဒေသခံတွေပြောတာကို များများနားထောင် မယ်။ တကယ့်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။
အင်္ဂလိပ်စာမလေ့လာမီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက် ပြန်မေးကြည့်ပါ။ “ငါ ဘာကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာချင်ရာတာလဲ” လို့ပေါ့။ ကိုယ်တိုင်ကတတ်ချင်လို့လား၊ သူများက လေ့လာခိုင်းလို့လား။ ဘ၀မှာ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်မှ ခိုင်မြဲတာ။ ဒီလိုမျိုးပဲ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း ကိုယ်တိုင်က မဖြစ်မနေ သင်မှရမယ်၊ တတ်မှဖြစ်မယ်ဆို တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ လေ့လာသင်ယူကြည့်ပါလား။
ကိုယ်တိုင်က လေ့လာချင်တာသေချာရင် ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ဆိုတာ အလွယ်လေးပဲ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို သွားရတော့မယ်ဆိုပါတော့ တကယ့်အခွင့်ကောင်းပဲ။ ကိုယ့်ပန်းတိုင်က အင်္ဂလိပ်လိုတတ်မှဖြစ် တော့မယ်။ ဒါကြောင့် သေရေးရှင်ရေး အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာရတော့မယ်။ အသုံးများတဲ့ စာလုံး အတော်များများ၊ စကားစုအတော်များများကို သိရတော့မယ်။ ပြန်မပြောတတ်ရင်တောင် သူများပြောတာကို သိအောင် အရင်လေ့လာသွားရမယ်။ အသံထွက်တွေ လေ့လာရတော့မယ်။ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတာတွေ အားလုံးကို ချရေးထားလိုက်။
ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ဘယ်နှနှစ်လောက်လျှောက်မှာလဲ။ ဒီမေးခွန်းကတော့ ဖြေဖို့ခက်မယ်ထင်တယ်။ အရေးကြီး တာက လက်တွေ့ကျကျ လုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ တစ်ပတ်မှာ နာရီ ၆၀ အလုပ်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားသူတစ် ယောက်ဟာ နာရီ ၄၀ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ်ဆိုပြီး စီမံချက်ရေးထားလို့မရဘူး။ ဖြည်းဖြည်းချင်းစမယ်။ ပုံမှန်လေ့လာနိုင်အောင် စပြီးကြိုးစားမယ်။ အလုပ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးကို စပြီးလုပ်မယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲတွေကို စပြီးမကိုင်မိစေနဲ့။ တစ်ပတ်လောက် လေ့လာပြီး ကိုယ့်အနေအထားကို ပြန်သုံးသပ်မယ်။ လိုအပ်ရင် လေ့လာမှုကို အတိုးအလျှော့ပြန်ညှိမယ်။ ညဘက် လေ့လာရတာပိုကြိုက်သလား၊ ဘတ်စ်ကားစီးရင်း လေ့လာ သွားရတာကို ကြိုက်သလား၊ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာ တစ်ယောက်တည်းလေ့လာရတာကို ကြိုက်သလား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ လေ့လာရတာကို ကြိုက်သလား၊ စာဖတ်ရင် သီချင်းဖွင့်ထားတာ ကို သဘောကျသလား ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် လုပ်ငန်းစဉ်ဇယားကို ရေးဆွဲထားဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်ဆိုတာ တွန်းအားတွေ အများကြီးလိုတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတာကြောင့် ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်နေရာကို ၀င်လုပ်ပေးလို့မရဘူး။ တကယ်ဖြစ်ချင်ရင် တကယ်လုပ်မှရမယ်။ ဇွဲမရှိရင် တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေဟာ၊ စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကြောင့် များတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တော့သင်နေတယ်၊ စိတ်ထဲမှာ မပျော်ဘူးဆိုရင် တစ်ခုခုလွဲနေပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်။ နည်းစနစ် မှားနေသလား၊ လမ်းကြောင်းလွဲနေသလား ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်။ သင်လို့ ပျော်နေတုန်း စိတ်ပျက်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးနေဖို့လည်းလိုတယ်။
ရေး၊ ဖတ်၊ ပြော၊ ကြား လေးနားညီအောင်လုပ်မယ်
တကယ်တော့ ရေး ဖတ် ပြော ကြားဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို4key skills ကိုပြောတာ။ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ ကြား၊ ပြော၊ ဖတ်၊ ရေး (Listening, Speakingb, Reading, Writing) လို့ဆိုထားတယ်။ အချို့ကျောင်းသားတွေက အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်း ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ကြတယ်။ အဲဒီလိုပြောနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်ဆိုရင် LSRW ကို မျှတအောင် လေ့လာဖို့လိုတယ်။ ဒီလေးမျိုးက အရေးလည်းကြီးတယ်။ ဘယ်ဘာသာပဲသင်သင် ဒီလေးမျိုး ပိုင်နိုင်မှရတယ်။ တစ်မျိုးတည်းမှာ ထူးချွန်နေလို့မရဘူး။ စာတော့ ကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်ပါရဲ့ မရေး တတ်ဘူးဆိုရင်လည်း လိုသေးတာပဲ။ မပြောခင် နားထောင်တတ်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဒီ4skills ကို အုပ်စုနှစ်စု ခွဲလိုက်လို့ရတယ်။
အထက်ကနည်းအတိုင်းသွားကြည့်ပါ။ လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံး Input ကို အရင်လုပ်မယ်။ ပြီးမှ Output ကိုသွားမယ်။ ပထမဦးဆုံး မေးခွန်းတွေ မေးတာကို နားထောင်ကြည့်မယ်။ ပြီးရင် မေးတာတွေကို ပြန်ဖြေကြည့်မယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က အင်္ဂလိပ်လို ရေးပေးတဲ့စာကို ဖတ်ကြည့်မယ်။ ပြီးရင် ပြန်စာကို ရေးကြည့်မယ်။ ဒါဟာ ဆက်သွယ်နည်းပုံစံပဲ။
Input နဲ့ Output ကို အစီအစဉ်တကျ သွားစရာမလိုဘူး။ တစ်ခါတလေ ပြောတာကို အရင် လုပ်ချင်လည်းလုပ်မယ်။ နားထောင်တာကို ဒုတိယနေရာမှာ ထားချင်လည်းထားမယ်။ ကြားတာကို နောက်မှ ပြန်ရေးတာကိုလည်း လုပ်ချင်လုပ်မယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့ပဲ။ ကိုယ်နဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့လူကလည်း အစီအစဉ်အတိုင်း သင်ယူခဲ့တာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။
တချို့ကျောင်းသားတွေဟာ ဘယ်အပိုင်းက ပိုပြီးအရေးကြီးသလဲလို့ သိချင်ကြတယ်။ အားလုံး အရေးကြီးတယ်။ တစ်ခုအပေါ်တစ်ခု မှီနေကြတာကြောင့်ပေါ့။ တစ်ခုခုမှာ ကိုယ်က အားသာချင်သာမယ်၊ ပိုပြီး အရေးပါတယ်ဆို တာကတော့ မရှိဘူး။ ဥပမာ အချိန်ရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို နားထောင်တဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ပြောတာကို ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်လုပ်တယ်။ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က စာဖတ်ကြတယ်။ အရေးကတော့ ၉ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ပဲရှိမယ်။ ဒီနှုန်းဟာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သူတွေကို လေ့လာကြည့်ရာမှာ အမှန်တကယ်ရလဒ်တွေပဲ။ ကိုယ့်အလုပ်အကိုင် အခြေ အနေအရ ကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်တယ်။
ပြောခဲ့တဲ့4skills မှာ သူ့သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်အောင် နည်းနည်းချင်းတော့ထည့်သွားရမယ်။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမှာ အသံထွက်အရေးကြီးတယ်။ အသံထွက်နဲ့ လေယူလေသိမ်းမှန်ဖို့ဆိုတာ လေ့ကျင့်မှရ တယ်။ စာရေးရင်လည်း စာလုံးပေါင်း အရေးကြီးတာပဲ။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှန်မှ စာရေးမှန်မယ်။ သဒ္ဒါနဲ့ ဝေါဟာရကြွယ်ဝမှုကလည်း လိုသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေကို အကုန်ဖြည့်ရမယ်၊ တစ်ခုပြည့်မှ တစ်ခုကို တက်ရမယ်လို့ မဆိုလိုဘူး။ သူ့အပိုင်းနဲ့သူ လိုအပ်ချက်တွေကို နည်းနည်းချင်းဖြည့်သွားနိုင်ရမယ်လို့ ပြောချင်တာ။
ကိုယ်တိုင်က ဘာကို ဘယ်လို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ဆွဲသွားနိုင်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ပြီးတော့မှ အားလုံးကိုပေါင်းစပ်ရမှာလေ။ ဥပမာ ပုံပြင် သို့မဟုတ် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို အရင်ဖတ်မယ်။ ပြီးရင် အဲဒီဇာတ်ကြောင်းကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြန်ပြောပြကြည့်မယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်။ ကြည့်ပြီးရင် အဲဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းလေးကို ပြန်ချရေးကြည့်မယ်။ ဒါတွေဟာ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် သွားနေတာပဲ။ ဆရာက သင်ရင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ငါ့ကိုသင်မှာပါလားလို့ သဘောပေါက်ထားစေချင်တယ်။
၁။ Listening Skill ကို ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ
လက်ထဲမှာရေးဖို့ ဘော့ပင်ကို အမြဲမကိုင်ထားနဲ့။ နားယဉ်အောင် နားထောင်ကြည့်မယ်။
# အင်္ဂလိပ်ပိုင်းအစီအစဉ် ရုပ်သံ TV ကိုကြည့်မယ်
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပရိုဂရမ်ကို ကိုယ်ရွေးမယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်သင့်တယ်။
ရုပ်သံမှာ ဗန်းစကားတွေ ဘယ်လိုပြောတတ်သလဲဆိုတာ မှတ်သားထားမယ်။ (စိတ်ထဲကမှတ်ဖို့ပြောတာ)
အင်္ဂလိပ်လိုအသံသွင်းထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဖတ်စာတွေ၊ ၀တ္ထုတွေ အများကြီးပေါ်နေပြီ။ ကက်ဆက်ခေတ် မဟုတ်ဘူး၊ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင် MP3, MP4 တွေနဲ့ နားကြပ်တပ်ပြီး နားထောင်နိုင်တယ်။
ဒီခေတ်မှာ ဗီဒီယိုကားတွေကလည်း ဈေးသက်သာ၊ စာတန်းထိုးတွေကလည်းပါလာပြီ။ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးပါ တဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေဝယ်ကြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
အင်္ဂလိပ်စာကို အွန်လိုင်းမှာဝင်ပြီး နားထောင်၊ လေ့လာနိုင်ခွင့်တွေ ဒီခေတ်များ အများကြီးရနေပါပြီ။
# အသုံးတည့်တဲ့ အွန်လိုင်း Link တွေကိုမှတ်ထားပါ
ဥပမာ http://www.englishclub.com/listening/index.htm လိုနေရာမျိုးတွေကို ၀င်ကြည့်ပါ။
၂။ Speaking နဲ့ Pronunciation Skill တွေကို ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ
ကြိုက်တာကို ပြောကြည့်ပါ။ ပြောချင်တာကိုပြောကြည့်ပါ။ လူမြင်ကွင်းမှာတော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့။ အရူးလို့ အပြောခံ နေရဦးမယ်။ ပြောရင်လည်း ကိုယ့်အသံကိုယ်ပြန်ကြားရအောင် ပြောကြည့်။ တတ်နိုင်ရင် အော်ပြောကြည့်မယ်။
# ကိုယ့်အသံကို အသံသွင်းထားကြည့်မယ်
ဒါကတော့ သိပ်ပြီးမလွယ်ဘူးထင်ရပေမယ့် အသံထွက်အားနည်းချက်ကိုသိပြီး အမြန်ဆုံးပြင်နိုင်တဲ့နည်းလို့ သိထားပါ။ စာပဲဖတ်ဖတ်၊ တစ်ခုခုကိုပဲပြောပြော ကိုယ့် အသံကို ပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်။ မူရင်း သူများထွက်တဲ့ အသံနဲ့ တိုက်ဆိုင်ကြည့်မယ်။ ဒီခေတ်မှာ ဒါကလည်း မခဲယဉ်းဘူး။ အသံထွက် အဘိဓာန်တွေရှိနေပြီ။
# အတန်းတွေထဲမှာ သူများတွေပြောရင် ကိုယ်လည်းလိုက်ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်။
# အများသုံး idioms တွေကို လေ့လာမယ်။
# ကိုယ့်ဘာသာစကားမှာ မပါတဲ့ အသံထွက်တွေကို အထူးလေ့ကျင့်မယ်။
ဥပမာ ဘာသာစကားအတော်များများမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံး R နဲ့တူတဲ့ အသံထွက်မျိုးရှားတယ်။ အထူးလေ့ကျင့် သင့်တယ်။
ဆရာနဲ့သင်နေတာဆိုရင် လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ နားစိုက်ထောင်ပါ။ သူကချည်းပြောနေတဲ့ဆရာထက် ကိုယ့်ကိုပြော ခွင့်ပေးပြီး အပြန်အလှန်သင်တတ်တဲ့ဆရာမျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
# စာလုံးတွေ စာကြောင်းတွေရဲ့ stress တွေကို လေ့လာပါ။
လေယူလေသိမ်း၊ အသံအတိုအရှည်၊ အတိမ် အနက် အသံထွက်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
# လျှာခလုပ်တိုက်နိုင်လောက်တဲ့ tongue twister စာလုံးမျိုးတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။
# အသုံးဝင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလိုင်းတွေရဲ့ link တွေကို ပေးလိုက်ပါတယ်။
၃။ Reading နဲ့ Vocabulary Skill တွေအတွက် ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ
# တစ်ခုခုကို နေ့တိုင်းဖတ်ပါ
ကလေးစာအုပ်၊ လွယ်ကူလေ့လာ အင်္ဂလိပ်စာဖတ်စာအုပ်များ၊ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ အင်တာနက်ဆိုက်၊ ၀တ္ထု တွေကို အင်္ဂလိပ်လို နေ့စဉ်ဖတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ကိုယ်စိတ်ပါတဲ့စာကိုဖတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ စိတ်မပါတဲ့၊ မဖတ်ချင်တဲ့စာတွေကို ဇွတ်ဖတ်နေရတာ စိတ်ဖိစီးပါတယ်။
# ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ level ကိုပဲဖတ်ပါ
ဖတ်လို့များများနားလည်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ခက်လွန်းတာတွေဖတ်နေရင် နားမလည်တော့ စိတ်ပျက်သွားလိမ့် မယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ level အလိုက်ခွဲထားသလို၊ level အလိုက်တက်တာပဲကောင်းတယ်။ ဥပမာ 500 level, 1000 level, 1500, 2000, 3000, 4000 ဆိုပြီးတော့ level အလိုက်မြင့်သွားလိမ့်မယ်။ နိမ့်ရာကနေစပြီးလေ့ လာသင့်တယ်။
# ဇာတ်လမ်းတွေဖတ်ရင် W ငါးလုံးကို ပြန်တွေးတတ်ရမယ်
W ငါးလုံးဆိုတာက (Who, What, Where, When, Why) ဆိုတာကိုပြောတာ။ ဘယ်သူ့အကြောင်းကိုပြောနေ တာလဲ။ ဘာတွေဖြစ်သွားသလဲ။ ဘာကြောင့်အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ။ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားတာလဲ။ ဘယ် အချိန်မှာ ဖြစ်သွားတာလဲ စတာတွေကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်နားလည်နိုင်ရမယ်။ မြန်မာလိုပြောရင်တော့ “ဘ” ငါးလုံး ပေါ့။ ဒါတွေကို နားလည်ရင် ပြန်ပြောပြဖို့ သို့မဟုတ် ပြန်ဖြေဖို့ အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်။
# အနားမှာ English-English Dictionary ကိုထားပါ
ကိုယ့်ဘာသာစကားတွေနဲ့ ပြန်ဆိုထားတဲ့ dictionary တွေကို အားကိုးအားထားပြုရင် မှားတတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို အင်္ဂလိပ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကလည်း ရှင်းပါတယ်။ နားလည်လွယ်တာကြောင့် အင်္ဂလိပ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းထားတဲ့ အဘိဓာန်ကိုပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။ အင်တာနက်သုံးသူတွေဆိုရင် အွန်လိုင်း ပေါ်က အင်တာနက် dictionary တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
# ကိုယ်ပိုင် dictionary လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါ
- မှတ်စုစာအုပ်လေးတစ်အုပ် သီးခြားထားပါ
- အက္ခရာစဉ်လိုက် စာမျက်နှာထိုးပြီး ဝေါဟာရတွေကို မှတ်ထားပါ
- အသုံးများ ပြောစကားတွေကို မှတ်ထားပါ
- အသုံးများစာကြောင်းတွေ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာကြောင်းတွေ ရေးမှတ်ထားပါ
- ညတိုင်း အိပ်ယာမ၀င်မီ တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ
# Reading Skill အတွက်လေ့ကျင့်ဖို့ link တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
၄။ Writing Skill အတွက် ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ
ဂရမ်မာတွေ စနစ်တွေ ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့။ လွတ်လပ်စွာ ရေးချင်သလိုရေးပါ။ ပျော်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ပျော်သွားရင် ပိုရေးချင်လိမ့်မယ်။
# အီးမေးလ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးပါ
ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေ အီးမေးလ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးနိုင်အောင်လုပ်ပါ
# ပြည်တွင်းထုတ်သတင်းစာကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးကြည့်ပါ
ဒါကနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းပဲ။ တတ်နိုင်ရင် ပြည်တွင်းထုတ် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာနှစ်စောင်ဝယ် ပြီး ပြန်တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပါ။ အကျိုးများပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာမှာ စာလုံးပေါင်း spelling စနစ်တွေရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ စာလုံးပေါင်းမှားတာတွေကို spelling-checking လုပ်ခိုင်းနိုင်ပေမယ့်၊ ကိုယ်တိုင်ရေးနေတာဆိုရင်တော့ ဂရုစိုက်ပြီး စာလုံးပေါင်းမမှားအောင် လုပ်ပါ။
# မှားတတ်သော စာလုံးပေါင်းတွေကို လေ့လာပါ
# မှားတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာပါ
# အပြန်အလှန်ပေးစာတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုပေးနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထားပါ
# Writing Skill အတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ link တွေကတော့
Grammar ကို မကြောက်ပါနဲ့
# Grammar ဆိုတာ ဆက်သွယ်ဖို့ပါ
လေ့လာသူတွေအများစုရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဂရမ်မာဆိုတာကြီးကို ဖိစီးတတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို နည်းစနစ်ကျကျ စကတည်းက လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းတွေမှာ တက်ခဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ သဘောတရား လောက်ပဲနားလည်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့ လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ဆိုပေမယ့် များများရေး၊ များများပြောလာနိုင်ရင် အဆင် ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
သဒ္ဒါမတတ်၊ စာမတတ်ဆိုတာကိုမေ့ထားပါ။ ဂရမ်မာနဲ့ချည်း အချိန်ကုန်နေစရာမလိုပါ။ ရေးကြည့်ပါ။ တိုတိုလေး တွေစရေးပါ။ နည်းနည်းရေးပြီး တိုးသွားကြည့်ပါ။ တစ်ယောက်တည်းမနေပါနဲ့။ ဆရာတွေကို ကိုယ်ရေးထားတာ ပြကြည့်ပါ။ ကိုယ့်လို အင်္ဂလိပ်စာဝါသနာတူသူချင်း ရေးထားတာတွေပြပြီး ဝေဖန်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ တစ်ယောက်တည်းလေ့လာတာထက်၊ အများနဲ့လေ့လာတာ ပိုပြီးအကျိုးများတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ထက် ငယ်သူတွေကို ပြန်ပြီးဂရမ်မာသင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ သင်ချင်ရင် ပြင်ဆင်မယ်။ ပြင်ဆင်ရင် တတ်တယ်။ ဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာ ဆရာလုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိမှဖြစ်တာကြောင့် ဆရာလုပ်ချင်စိတ်က သင်သွားပါလိမ့်မယ်။
# Grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသင့်တဲ့ link တွေ
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on August 27, 2011 at 16:22
အခုလို ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.
Permalink Reply by myatsuyeilinn on August 27, 2011 at 16:26
Permalink Reply by K Lwin on August 27, 2011 at 16:41
Wow! တကယ်ကို အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ advice post လေးပါပဲ.. တင်ပေးသူကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဗျာ.. စာတွေ အများကြီး တတ်ပြီး အောင်မြင်ပါစေ..
Permalink Reply by ma lay nge on August 27, 2011 at 16:56
Great!!!!!!!!Thank u very much.
Permalink Reply by Kaungmalay111 on August 27, 2011 at 16:58
Permalink Reply by kavidhaja on August 27, 2011 at 17:21
Permalink Reply by Rosa ja pha aung on August 27, 2011 at 17:47
Thank you so much .I Love it!!!!...:)
Permalink Reply by George Owell on August 27, 2011 at 17:55
Permalink Reply by Swe Swe on August 27, 2011 at 17:59
Permalink Reply by 3c9b5qjxdq27n on August 27, 2011 at 18:42
Permalink Reply by Khaing Khaing Oo on August 27, 2011 at 19:08
Thanksalot.. very useful...
Permalink Reply by Yan Naung Soe on August 27, 2011 at 19:40